विकास / पूर्वाधार « GDP Nepal
उद्योगीको ढाड सेक्दै विद्युत् प्राधिकरण, १५ प्रतिशत महसुल बढ्ने
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाउँमा औद्योगिक क्षेत्रमा आतंक मच्चाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई संकटमा पार्नेगरी नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत्
कोरोनाको असर पर्यटनपछि हाइड्रोमाः कामदार फर्केनन्, सामान पनि आएन
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालका एकपछि अर्को क्षेत्र प्रभावित बन्दैछ । पर्यटन क्षेत्रमा यसको असर सुरुदेखि देखिएको छ भने अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित देखिन्छ ।
एमसीसीबारे बोल्यो अमेरिका, दूतावासले सार्वजनिक गर्‍यो पूर्णपाठ र १० हाइलाइट !
काठमाडौं । नेपालमा एमसीसी विवाद चर्कंदै गएपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसलाई प्रष्ट्याएको छ । दूतावासले अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा यसको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक गरेको छ । दूतावासका अनुसार नेपालमा लागू
भूकम्पपछि निजी आवास निर्माणमा १४ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी !
काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गराए पनि पुनर्निर्माणको चरणसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक बहार आएको एक अध्ययनले देखाएको छ । पुनर्निर्माण्ले अर्थतन्त्रमा औसत ४.५
‘जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनलले बनाउँछ निजगढ विमानस्थल’
काठमाडौं । नागरिक उड्ययन तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले २५ वर्ष पहिल्यै नै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवश्यकता पुष्टि भइसकेको बताएका छन् । शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा पोख्रेलले
अमेरिकी सहयोगको परियोजनामा स्थानीयको विरोध, जबरजस्ती अघि बढाइए प्रतिकार !
काठमाडौं । अमेरिकी सरकारद्वारा नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना सुरुमै विवादमा तानिएका छन् । एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित हुन नसक्दा यसको वैधतामै संकट उत्पन्न भइरहेका
नेपालमा ऊर्जाको बजार छैन भन्ने गलत हल्ला चलिरहेको छः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आह्वान गरेका छन् । ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र क्षेत्रीय विकास’ विषयक शत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री
पप्पु कन्स्ट्रक्सनको आठौं आश्चर्यः वीरगञ्ज-बरियारपुर सडक ८ महिनाअगावै बनायो !
काठमाडौं । ठेक्का लिएर कहिल्यै समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरीय निर्माणसमेत नगरेको भन्दै देशैभर बदनाम पप्पु कन्स्ट्रक्सनले हुलाकी राजमार्गको एक खण्डमा समयअगावै काम सम्पन्न गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको जोश दुई महिनामै हराएको छ । नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा गेमचेन्जर मानिएको निजगढ विमानस्थल मंसिरभित्रै हजारौं मानिस लगेर शिलान्यास गर्ने घोषणा